Androany ny tantara mitohy amin'ny fahitalavitra Apple TV + tantaran'i Lisey | Avy amin'ny mac aho
Ny andian-tantara Apple TV + "Lisey's Story", nosoratan'i Stephen King ary i Julianne Moore, mpandresy nahazo ny loka Academy, premieres anio zoma 4 jona ao amin'ny Apple TV +. Miorina amin'ny tantara amidy be indrindra nataon'i Stephen King,ary natolotry ny mpanoratra ny tenany, "Lisey's Story" dia mampihetsi-po lalina izay manaraka an'i Lisey Landon (Moore) roa taona taorian'ny fahafatesan'ny vadiny.
Ny andiany voalohany nataon'i Apple, "Lisey's Story" dia notarihin'i Pablo Larraín, ary avy amin'i JJ Abrams 'Bad Robot Productions ary Warner Bros. King, Moore ary Larraín dia mpamokatra mpanatanteraka miaraka amin'i Abrams, Ben Stephenson ary Juan de Dios Larraín. Ny fizarana tsirairay amin'ilay andiany dia nosoratan'i Stephen King manokana. Joan Allen, Jennifer Jason Leigh ary Dane DeHaan no mpitarika hafa miaraka amin'i Moore sy Owen.
Miorina amin'ny tantara amidy be indrindra nataon'i Stephen King,Nanaovan'ny mpanoratra ny tenany, "Lisey's Story" dia mampihetsi-po lalina izay manaraka an'i Lisey Landon (Moore) roa taona taorian'ny fahafatesan'ny vadiny, ilay mpanoratra tantara malaza Scott Landon (Clive Owen voatendry an'i Oscar). Andiana hetsika tsy milamina izay mahatonga an'i Lisey hiatrika fahatsiarovana ny fanambadiany tamin'i Scott izay niniany nosakanana tsy ho ao an-tsainy.
Ny andiany dia misy fizarana 8 ary heverinay fa hanaraka ny mavitrika mitovy amin'ny andiany hafa izy io. Toko iray dia havoaka isan-kerinandro. Ka manana roa volana mialoha isika hankafizantsika ny drafitr'ity tantara ity. Raha te hahafantatra bebe kokoa momba an'ity andiany ity ianao dia mamporisika anao hiditra amin'ilay pejy Web ofisialy manana an'io i Apple.
Heverinay fa miaraka amin'ity mpilalao sarimihetsika ity ary tantaran'i Stephen King, sarotra fa tsy tsara ny andiany ary maniry bebe kokoa izahay. Handeha miadana tokoa ny herinandro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Androany ny andiany fahitalavitra Apple TV premieres + Lisey's Story